Ukutya okusenkonkxiweyo, inyama enkonkxiweyo, inyama yehagu efakwe enkonkxiweyo - HUIQUAN
Inkampani yethu yenye yezona zinto ziphambili zokutya okunkonkxiweyo eziveliswa kumzantsi-ntshona weTshayina ngamava obuchule. Inkampani yethu yasekwa kwi-2003.Ikhowudi yethu yefektri yokuthumela ngaphandle yi-T-11 yokuvelisa ukutya okusemathinini kwaye sinokuBhaliswa koGutyulo kunye ne-HACCP, iSatifikethi se-ISO. Inkampani yethu ikwi-Xinjin County, kwisiXeko saseChengdu ecaleni kwe-308 yeNdlela yeSizwe, egubungela ummandla ongama-24,306 square metres. Sineemeko ezincomekayo zemveliso yogutyulo kunye nendawo ezisingqongileyo. Iimveliso zethu zineentlobo ezingaphezu kwama-20 ezahlukeneyo, ezifana nenyama yesidlo sasemini, inyama yehagu eyotyiweyo, inyama edayiweyo, amakhowa, idada eligcadiweyo, njl.njl. Izinto ezikrwada zenyama ziphuma ikakhulu kwimizi-mveliso yenyama ebhaliswe kwi-State Commodity Inspection Bureau kwaye yafumana isatifikethi seHACCP. Iimveliso zethu zithengiswa ekhaya nakwamanye amazwe. Uninzi lwabathengi bathanda iimveliso zethu. Sithemba ngokunyanisekileyo ukusebenzisana nawe ukudala ikamva eliqaqambileyo.
Inyama yehagu eqhotsiweyo egciniweyo
Inyama yehagu kunye neHam ilula kwaye isempilweni
Inyama yehagu enkonkxiweyo enkonkxiweyo yoKutya okuGcina ixesha elide
340g enkonkxiweyo yehagu Isidlo sasemini Inyama
Idada elosiweyo elinkonkxiweyo elinencasa eyodwa
340g yenkukhu enkonkxiweyo Isidlo sasemini Inyama
I-Curry yenkomo yenkomo enkonkxiweyo Ukutya okuKhawuleza
Inyama yenkomo enkonkxiweyo enoBomi obude beShelf
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukunkonkxa kufuna...
Abantu abaninzi bakholelwa ukuba ukunkonkxa kufuna ubushushu obuninzi kwaye kutshabalalisa izondlo ezithile, ngoko ke ukunkonkxa “akunazondlo”. Izazinzulu zithelekisa umxholo wezondlo ezitsha, ezikhenkcezisiweyo kunye nemifuno kunye nemifuno, kunye neziphumo ...
Kubomi bethu bemihla ngemihla, ukuze kwandiswe ukugcinwa kokutya, amawaka eminyaka abantu becinga ngeendlela ezininzi, ezinjengokutshaya, ilanga, ityuwa, njalo njalo.Ubuchwephesha bokunkonkxa baqulunqwa ngumfo ongumFrentshi, uNichols Appert.Ngo-1795, urhulumente waseFransi, ...
Iqabane eligqwesileyo: I-brand ye-Huiquan enkonkxiweyo ye-POR...
Andikwazi ukulinda ukungcamla… Iqabane eligqwesileyo:I-Huiquan brand enkonkxiweyo YEHAGU IXESHA LUNCHEON NYAMA+Sichuan Hotpot. Imbiza eshushu yaseSichuan ithandwa kakhulu kwiindawo ezininzi eTshayina, iyawuvuselela umdla wakho. Inyama yehagu yesidlo sasemini yinto ebalulekileyo...
I-Canning Beef Brisket, Iinyama ezinkonkxiweyo zokusinda, Inyama yehagu yesidlo sasemini, Inkukhu enkonkxiweyo, Idada Eliqhotsiweyo elinkonkxiweyo, Inyama yehagu enkonkxiweyo,